i-crucible yesithando somlilo se-muffle - XTL
i-crucible yesithando somlilo se-muffle
Usendaweni efanele ye- i-crucible yesithando somlilo se-muffle.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe XTL.siqinisekisa ukuthi kulapha XTL.
I-XTL yakhelwe futhi yakhiwe kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphezulu kanye namasu akamuva ngokuhambisana nezindinganiso zomkhakha..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu i-crucible yesithando somlilo se-muffle.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
I-fire clay crucible yesithando somlilo se-muffle
Amabhodwe obumba okuhlola umlilo akhethwa ngokungahleliwe kuphakheji lamakhreyithi ngokuya ngesilinganiso samasampula.Ukwenza ngokwezifiso kuyatholakala futhi kunoma iyiphi imfuneko yokuma, usayizi nokunye. Singakwazi ngisho nokubumba ilogo, imodeli no. noma ezinye izimpawu phansi kwe-crucible uma kudingwa ikhasimende.